အသံလွှင့်သူများသည် Viz Virtual Studio ဖြင့်ပိုမိုထိတွေ့နိုင်သော Visual Storytelling ကိုဖန်တီးနိုင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » အသံလွှင့်သူများသည် Viz Virtual Studio နှင့်ပိုမိုထိတွေ့နိုင်သော Visual Storytelling များကိုဖန်တီးနိုင်သည်
အသံလွှင့်သူများသည် Viz Virtual Studio နှင့်ပိုမိုထိတွေ့နိုင်သော Visual Storytelling များကိုဖန်တီးနိုင်သည်
အကယ်လို့သင်ဟာအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာဖန်တီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ သင့်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့သင်ဝေမျှမဲ့ပရိသတ်အတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတာမအံ့သြပါ။ အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိအကြောင်းအရာဖန်တီးသူတိုင်းတွင်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်၊ ၎င်းတို့ဖန်တီးထားသောအမြင်အာရုံသည်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်ထိုအတွေ့အကြုံကိုမျှဝေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အသံလွှင့်သူကသူတို့၏ဇာတ်လမ်းများကိုပရိသတ်များအတွက်ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်လျှင်ကော။ သူတို့ကအဲဒါကိုပိုပြီးအသက်ဝင်စေမယ်ဆိုရင်ကော။ ကောင်းပြီ၊ Vizrt ပုံနှင့်၎င်းတို့၏သို့ကြွလာ virtual စတူဒီယို သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကိုပရိသတ်တွေအတွက်ပိုပြီးမှန်ကန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
1997 ကတည်းက Vizrt (Real-Time တွင် Visualization) သည်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အားကစား၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများတွင်မီဒီယာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းပြောပြကိရိယာများကိုကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။ Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်၊ ဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်း၊ စတူဒီယိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အားကစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သတင်းစာဆရာဇာတ်လမ်းများအတွက်ကုမ္ပဏီသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲအခြေပြုအဖြေများကိုပေးသည်။ အဆိုပါပုံပြင်များကပြောကြားခဲ့သည် Vizrt သုံးစွဲသူများသည်နေ့စဉ်ဘီလီယံသုံးဘီလီယံအထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး၎င်းတွင်မီဒီယာကုမ္ပဏီများဖြစ်သော CNN၊ CBS၊ အား NBC, Fox က, ဘီဘီစီ, BSkyB, Sky Sports နှင့်အယ်လ်ဂျာဇီယာ, NDR, ZDF, စတားတီဗီ, ကွန်ယက် 18, Tencent နှင့်များစွာသောပို။
Vizrt virtual စတူဒီယို
Viz အင်ဂျင်၊ viz ရဲ့ Virtual စတူဒီယို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ virtual virtual အစုံများနှင့်တိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တီထွင်သူဖြစ်သည်။ Virtual Set (VS) နှင့်တိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန် (AR) တို့သည်ရှေ့တန်းမှရောက်ခဲ့သည် Virtz ရဲ့ ဖြစ်နိုင်သမျှ၏အလားအလာနယ်နိမိတ်မှကြွလာသောအခါကဆက်လက်ဆက်လက်ထားတဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ သီဟ အဆင့်မြင့်ခြေရာခံခြင်းစနစ်များနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့အင်အားအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်နှင့်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်ဆာဗာတို့ဖြင့်ပြန်ဆိုခြင်းတို့ဖြင့်စာနယ်ဇင်းသမားများအတွက်ထိရောက်သောသတင်းခန်းလုပ်ငန်းအသွားအလာပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်စေသည်။
အဆိုပါ viz ရဲ့ Virtual စတူဒီယို စတူဒီယို၏အရွယ်အစားမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူထုတ်လုပ်သူများအားဇာတ်လမ်းပြောပြရာတွင်အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နိုင်သည်။ Virtual Studio သည်ထုတ်လုပ်သူများအားရှုပ်ထွေးသော၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်၊ 3D virtual အစုံ၊ တိုးချဲ့ထားသောအမှန်တကယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်မည်သည့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မဆိုလက်တွေ့အဖြစ်အပျက်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ရှုပ်ထွေးသောပုံပြင်များကိုပြောသောအခါ virtual အစုံများနှင့်တိုးချဲ့ထားသောအမှန်တကယ်ဂရပ်ဖစ်များသည်တင်ပြသူများနှင့်၎င်းပုံပြင်များကိုပျမ်းမျှကြည့်ရှုသူအားပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သူတို့၏စွမ်းရည်အဖြစ်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်တင်ပြသူ၏ရှေ့မှောက်နှင့်နောက်ကွယ်ရှိဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်များကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ပရိုဂရမ်၏သစ္စာရှိမှုနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ တင်ပြသူအား 3D space များ ဖြတ်၍ လမ်းလျှောက်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးထားသည်။ ကင်မရာသည်သူတို့နှင့်အတူရွေ့လျားနေပြီး virtual chart များသို့မဟုတ်အခြား infographics အမျိုးအစားများနှင့်အလိုအလျောက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေစဉ်ဖြစ်သည်။
viz ရဲ့ Virtual စတူဒီယို မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဆိုတိုးချဲ့ထားသောအမှန်တကယ်ဂရပ်ဖစ်များကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည့်မည်သည့်ခြေရာခံပေးသူနှင့်မဆိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Viz Virtual Studio ၏အမှန်တကယ်ဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများကိုပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးပြင်ပထုတ်လုပ်မှုများ (ရွေးကောက်ပွဲထုတ်လွှင့်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လုပ်မှုများ) နှင့်အတူစတူဒီယိုနှင့်အတူတူပင်လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
viz ရဲ့ Virtual စတူဒီယို မည်သည့်စက်ယန္တရားသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံအခြေပြုခြေရာခံစနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုမှလာသည့်ခြေရာခံအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲပေးသည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုသုံးနိုင်သောကင်မရာဒေတာသို့ပြောင်းသည် viz အင်ဂျင်. viz ရဲ့ Virtual စတူဒီယို အများအပြားမှခြေရာခံသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေ Viz အင်ဂျင် နှင့်မလိုအပ်သောများအတွက် failover လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပါဝင်သည် viz ရဲ့ Virtual စတူဒီယို ထပ်တူပြုခြင်းတွင်အလုပ်မလုပ်သောစနစ်များအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်အခြေအနေ။
Virtz Virtual Studio ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာ -
3D ကို virtual အစုံ
အလိုလို interface ကို
ထောက် HD & UHD
ကျယ်ပြန့် plug-in ကိုသက်ရောက်မှု
Co-cyc နှင့် holdout Matte
Viz Virtual Studio နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် www ။vizrt.com / ထုတ်ကုန် / viz-virtual စတူဒီယို။
အဘယ်ကြောင့် Choose VizrtVirtual Storytelling Solutions
ပုံပြင်ပြောခြင်းသည်အတိတ်ကာလဟောင်းဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာဖန်တီးသူတိုင်းတွင်ပြောပြစရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ ထုတ်လွှင့်သူများအတွက် Vizrt သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုဘဝကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ အသစ်တီထွင်ထားသောတိုးတက်မှုနှင့် Virtual အစုံ၏တိုးတက်မှုကြောင့် Virtz ၏ Virtual စတူဒီယိုသည်အသံလွှင့်သူများအတွက်သူတို့၏ဇာတ်လမ်းများကိုပရိသတ်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သီဟ ၀ န်ထမ်း ၇၀၀ ခန့်ရှိသောပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိရုံး ၃၀ တွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီသည်အိုင်ပီအခြေပြုဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်မောင်းနှင်သည့်ဗွီဒီယိုဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ NewTek. Vizrt ကပိုင်ဆိုင်သည် Nordic မြို့တော်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ VIII.
အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို သီဟ နှင့်သူတို့ပြောပြဇာတ်လမ်းများ www သို့သွားရောက်။vizrt.com / ။
အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းရှင် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor image-based ခြေရာခံခြင်းစနစ် ပေါင်းစည်းမှု မီဒီယာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူ NewTek Nordic မြို့တော်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ VIII software-based ဖြေရှင်းချက် လှံ & Arrows စတူဒီယိုအလိုအလျောက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual စတူဒီယို အမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြ viz ရဲ့ Virtual စတူဒီယို Vizrt 2020-05-05
ယခင်: Red Bee သည်ဘီစီဘီစီပါရှန်းနှင့်အာရဗီရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများကိုဖွင့်သည်
နောက်တစ်ခု: Famer ၏အားကစားအသံလွှင့်ခန်းမသည် Studio Technologies နှင့်တိုက်ရိုက်အသံလွှင့်သည်